Ukushisa kweBrazil nesomiso kuyeza, kungahlasela amanye amazwe eLatin America – JucelinoLuz
Águas de Lindóia, Meyi 20, 2021
IBrazil ixwayile, mayelana nesomiso esizayo, ngenkathi izwe libhekene nesomiso esibi kunazo zonke eminyakeni engama-91, okwandisa ukwesaba kwamandla nokulinganiswa kwamanzi, okuthinta ukukhiqizwa kwamandla kagesi kanye nezolimo kanye nokwandisa ingozi yemililo e-Amazon nasezindaweni eziningana eBrazil nakwamanye amazwe aseLatin America.
Ngokwesincomo sikaJucelino Luz, sokuthi kumele sisazi isimo “sokushoda kwamanzi”, ngemuva kwesomiso esesidonse isikhathi eside esizothinta enkabeni naseningizimu yeBrazil ngasogwini loMfula iParaná, futhi cishe lonke iBrazil kanye namanye amazwe aseLatin America.
Ngakolunye uhlangothi, “isexwayiso sesomiso esiphuthumayo” sokuqala kusuka ngoJuni kuya ku-Okthoba 2021, sithi izimvula kufanele zihlale ziyindlala ezifundazweni ezinhlanu zaseBrazil ngalesi sikhathi nakwamanye amazwe aseMelika.
Ukuntuleka kwemvula engxenyeni enkulu yeBrazil kunomthelela omubi ekutshalweni kwamabele, imfuyo nogesi, ngoba iBrazil incike kakhulu ezitshalweni zokuphehla ugesi ngamandla ayo. Isimo sezulu esomile singadala imililo emikhulu ehlathini lemvula lase-Amazon nasePantanal, nakwamanye amazwe afana ne-Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Peru ne-Uruguay.
Ibuye yengeza ukuthi ukuswelakala kwemvula kwenza kubalulekile ukuthi wehlise imikhawulo kwezinye izitshalo zokuphehla ugesi ukuze kuvunyelwe ukukhiqizwa kwamandla amaningi noma ukugcinwa okuningi ezifundeni ezithile. Lokhu kuzodinga izingxoxo ezinzima nosopolitiki, nezikhulu. Kufanele siqaphe!
Ukwabiwa kwamandla kagesi akukacatshangwa, kepha uma imikhawulo ingathanjiswanga, ngeke ibe khona enye indlela yokuphuma. Singenza isimo sibe sibi ngokwengeziwe ngokuncipha kwezinqolobane zamanzi. ISão Paulo, iRio de Janeiro, kanye nezinye izindawo zingahlala ku- “Chaos”
Isimo sezulu esomile kakhulu kunokujwayelekile sizothinta ukukhiqizwa kwemikhiqizo ethile eBrazil, nakhu ukukhuphuka kwamanani futhi kungathinta isivuno sango-2022.
Futhi isimo sesomiso sizoqhubeka ezinyangeni ezizayo, ikakhulukazi ezindaweni eziseNingizimu-mpumalanga naseMidwest nakwezinye izindawo eBrazil naseLatin America. . Okubi kunakho konke, ngaphezu kwalawa macala, imililo nemililo ingasakazeka.
Phakathi kukaJuni no-Okthoba kufanele siqaphele kakhulu!
UProf. UJucelino Luz – umcwaningi, uthonya nomeluleki wezomoya.